Mpanamboatra fehikibo (SCB) mpanamboatra | Yinrich
Home > Products > Fitaovana an-dakozia > Fehikibo fehikibo (scb)
fehikibo mampihena (SCB)
Ny dia ampiasaina hampangatsiaka ho azy ary hampifangaro ny syrup amin'ny fehin-kibo conveyor. Ny fehin-kibo mampihena (SCB) dia fehikibo mahafinaritra. Fehin-kibo fanamafisam-peo tsy miova no ampiasaina, ohatra, amin'ny fampangatsiahana sy fanamafisana ny akora simika sy ny sakafo. Masinina mandroso sy azo antoka ary hadio izy io.
Yinrich no mpanamboatra fehin-kibo fampangatsiahana vy (SCB) avo lenta, manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana fehin-kibo conveyor isan-karazany. Yinrich's drive fehikibo famatsiana rafitra matotra dia matotra. Manana traikefa manan-karena sy ekipa talenta matihanina izahay hanomezana mpanjifa serivisy feno sy fehin-kibo fampangatsiahana vy (SCB) avo lenta.
Ny andian-tsarimihetsika SCB dia natao ho an'ny fampangatsiahana mandeha ho azy sy fampifangaroana ny syrup amin'ny fehikibo mampiady saina.